Apple wepụtara Beta 4 nke tvOS 10.2 maka Apple TV otu ụbọchị mgbe Betas maka ngwaọrụ ndị ọzọ | Esi m mac
Apple wepụtara tvOS 4 beta 10.2 maka Apple TV otu ụbọchị mgbe ngwaọrụ ndị ọzọ gachara
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | ọtụtụ
Apple jiri ụnyaahụ hapụ betas maka sistemụ WatchOS, iOS na MacOS, mana ndepụta ahụ na-efu Apple TV tvOS 4 beta 10.2 nke eweputara na awa ole na ole gara aga. Oge a, ha lekwasịrị anya atụmatụ ọhụrụ, mmezi ahụhụ na mmelite na sistemụ arụmọrụ, yana SDK, dị ka ntọhapụ mgbasa ozi nke Apple bipụtara. Kpọtụrụ, Beta a na-elekwasị anya na mmegharị dị mfe maka UIKit na ngwa TVMLKit, njikwa ngwaọrụ ejikọrọ, na nkwado maka Video toolbox kpuchie.
Ma anya ndozi nke Apple TV ga-abịa na ọnwa na-abịa site n'aka nke ngwa maka ikiri TV na ntinye aka. Apple n'onwe ya kọwara ya n'ụzọ a ọnwa ole na ole gara aga:
Ikiri TV na-esiwanye rụrụ na ngwa. Ma ugbu a, site na ngwa TV ọhụrụ, ị nwere otu ebe iji nweta ihe ngosi na ihe nkiri, site na ọtụtụ ngwa vidiyo. Ọ bụ ahụmahụ dị n'otu. Ngwa TV na-enye gị ohere ilele: ihe nkiri na ihe nkiri niile dị, chọta mmemme na-abịanụ, nweta ndụmọdụ maka ihe ọhụrụ, ma lelee nchịkọta vidiyo gị niile na iTunes I nwedịrị ike ịmalite ikiri ihe nkiri ma ọ bụ gosi ihe ngosi site na ngwa TV. Na ihe a niile na-enweghị agbanwe agbanwe ngwa.
Ọrụ bụ Nanị Banye bụ ihe mgbakwunye nke na-enye onye ọrụ ohere igosipụta nke ọma na onye na-eweta TV, yana ngwa vidiyo na ọbụlagodi na ọrụ ịkwụ ụgwọ.
Ruo taa, TVOS 10.2 dị naanị maka ndị mmepe edenyere na mmemme Apple, na-emegide ihe na-eme na MacOS na iOS enwere ike nweta dị ka onye nrụpụta ma ọ bụ n'okpuru mmemme beta ọha.
Bata ndị a na-apụta otu izu mgbe nke ikpeazụ bipụtara n’izu gara aga. Ohaneze Apple na-etinye izu na enweghị betas, mana oge a ọ na-ekwughachi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple wepụtara tvOS 4 beta 10.2 maka Apple TV otu ụbọchị mgbe ngwaọrụ ndị ọzọ gachara
PDF Ọkachamara ọkachamara, n'efu maka obere oge
Clear clipboard, usoro akpaka clipboard nhichapụ